Ingabe Yini Isifo sikaShukela? - South Africans with Diabetes
Usanda kuthola ukuthi unesifo sikashukela? Siyakwamukela. Njengoba usafuna ulwazi nokuthola mayelana nezinhlobo ezahlukene ngaso lesifo the different types of diabetes, nokuthi usichaze kanjani kubantu. Kungasiza ukuthi ube nolwazi oluphelele mayelana nalesifo. Engabe ikhona imbuzo onayo mayelana nalesifo? Ungabuza kuthina mphakathi wabantu abanelisifo Diabetic South Africans okanye uthumele i “email”.
Ukwazi mayelana nesifo sikaShukela
Engabe ufuna ulwazi mayelana nokuthi ushukela usebenza kanjani emzimbeni? Nansi ke incazelo.
Konke kuqala ngokudla esikudlayo, umsoco osekudleni esikudlayo uyagayeka esiswini, uphenduke uhlobo oluthile lukashukela olubizwa ngama carbohydrates khona emzimbeni lapho. Umzimba ke ukhipha ama hormones avumela ushukela ogeyikile emzimbeni ukuthi uye emthanjeni yegazi lokhu okunikeza umzimba womuntu umdlandla. Lama homoni ke abizwa nge “insulin” iwona alawula ushukela osemzimbeni womuntu kanye nokusebenza kwawo loyo shukela.
Kubantu ke abanesifo sikashukela, kutholakala ukuthi umzimba womuntu ukhiqiza “insulin” engawaneli umzimba, kokunye kube ukuthi umzimba awukwazi wona ukusebenzisa le homoni “insulin”. Lokhu ke kusho ukuthi ukudla okusesiswini akukwazi ukugayeka ngendlela efanele kuye emthanjeni yegazi. Lokhu kubanga ukuthi ushukela ube mningi egazini ungalawuleki, okuthi ngokuhamba kwesikhathi lokhu kube nomthelela ezinsweni zomuntu, kumehlo, nendlela imizwa esebenza ngayo ngisho nokusebenze kwenhliziyo imbala.
Izindaba ezimnandi ke ukuthi, ukuthi unaselisifo akusho ukuthi sekuphelile ngawe njengoba ikhona indlela yokuphila naso. Kuyaphileka nalesifo futhi isikhathi eside nje emva kokuba usutholile ukuthi unaso kepha ke kumele uqaphele futhi ugcine izinto ezimbalwa khona uzoba umqemane uphile isikhathi eside.
Okumele ukukhumbule TEEL:
Thatha imithi ngendlela akasho ngayo umhlengikazi.
(Take your medication as your doctor tells you to)
Idla ukudla okunempilo
(Eat healthy food)
Zivocavoce njalo uma uthola ithuba noma kanye nje ngosuku
(Exercise, a little every day)
Ncipha emzimbeni uma kumele ukwenze, ehlisa isikali somzimba wakho
(Lose weight, if you need to)
Izinhlobo ezahlukene zesifo sikaShukela
Inhlobo yokuqala ebizwa nge “Type 1 Diabetes”
Loluhlobo liphatha inani elincane labantu, njengoba kungu 5% kuya ku 10% ezinhlotsheni zikashukela. Loluhlobo ke lokuqala “Type 1” olungandile lona libangelwa ukuthi amasosha omzimba elwe nomzimba uqobo, lokhu kusho ukuthi amasosha omzimba abulala le homoni esiza ukuthi ukudla kugayeke emzimbeni. Ukuze lulungiswe loluhlobo, kumele lo olumphethe ahlele indlela akadla ngayo nokudla akakudlayo, kanti ke kuyaphoqa nokuthi kwenziwe imizamo yokuthi umuntu athole “insulin” nsukuzonke ukuze asizakale.
Inhlobo yesiBili ebizwa nge “Type 2 Diabetes”
Baningi abaphathwa ilenhlobo yesifo sikashukela njengoba ngokujwayelekile kungu 90% wabantu esikhonjwa kubo kwabanaso, lokhu kukhomba khona ukuthi baningi kakhulu. Sona ke sidalwa izinkinga ezimbili, esokuqala ukuthi le homoni enikeza umzimba womuntu amandla “insulin” isuke incane kakhulu emzimbeni, kanti ke okwesibili idalwa ukuthi umzimba unqabe le homoni ewusizayo ukuze ube namandla. Lokhu ke khona kungagwenywa ngokuthi umuntu aqaphele impilo akayiphilayo managing Type 2 is lifestyle change, aqaphele ukudla akakudlayo healthy eating, azivocavoce exercising, kanye nakho ukuncipha emzimbeni ungakhuluphali losing weight. Ngokuhamba kwesikhathi, umuntu onaloluhlobo lukashukela uyajovwa, aphinde anikwe namaphilisi okumele awadle.
Loluhlobo oluphatha abakhulelwe : Gestational Diabetes (GDM)
GDM uhlobo lutholakala ngenkathi owesimame ezithwele, kanti ngokujwayelekile luyaphela emva kokutetwa komntwana. Abesimame abanalolu hlobo kujwayelekile ukuthi ngokuhamba kweminyaka sibuye lesifo sesiwu loluhlobo lwesibili “Type 2 Diabetes” oluchazwe ngenhla.
Hlolela ushukela njalo ngonyaka
Kubalulekile ukuthi uthole ukuthi unaso yini isifo sikashukela kusenesikhathi ungakenzeki umonakalo omkhulu. Abanye abantu abanaloluhlobo lwesibili lukashukela “Type 2“ ababonakali kanti futhi abanye ababi nazo izimpawu eziyinkomba yalesifo, ingakho ke kubalulekile ukuthi bavakashele umtholampilo ukuyohlolwa ukuthi abanaso yini lesifo. Kanti ke ukuhlolelwa ushukela kulula kakhulu ngoba kusetshenziswa uthi oluncane nje kujovwe umunwe nakhona akukho buhlungu, kuthathwe igazi elizohlolwa nje kuphela. Vakashela umtholampilo noma umhlengikazi oseduze nawe ukuze ucwaningwe ngokushesha kanti akubuhlungu nokukwenza. Ngeminye imininingwane ngena la the common symptoms of diabetes.
Indlela okuphathana ngayo emoyeni ukuba nesifo sikashukela
Ukuba nesifo sikashukela kunomthelela omkhulu emoyeni walona osuke umphethe. Ukuba nosonhlalakahle onolwazi eduze kwakho ngalesifo uma unaso kusiza kakhulu, nalu ke uhlu lwabo osonhlalakahle abahamba phambili ekulweni nalesifo abakhethwe abantu abanaso lesifo bebavotela ngenhla yomsebenzi wabo omuhle The best South African specialists. Nakho ukuzibandakanya ngezinhlaka zabantu abaphethwe isona lesifo kuyasiza, njengekhasi lika Facebook elibizwa ngokuthi “we love Diabetic South Africans “ kanti ke zikhona nezinye izinhlaka zabantu ezitholakala ngokomoya online communities ongakuthokozela ukuba ingxenye yazo.
Ushukela noMzwangedwa Diabetes and depression kufana nezithupha ziya egwayini, kuyabasiza ke laba abanalesifo ukuthi bakuqaphele nakho lokho. Kwabanye ngisho ukwenza into engatheni nje iphenduka umsebenzi omkhulu Burnout, njengemsebenzi yasekhaya nje! Ukubhekana nalesifoDealing with a diagnosis kuyinselelo kwakhona. Kujwayelekile ke lokho kubantu abanesifo sikashukela ngoba phela ukuthola ukuthi unalesifo kuyakhathaza emoyeni… okubalulekile ukuthi awuwedwa, futhi sonke sisuka khona lapho. Noma kubukeka kunzima engathi ngeke kuze kulunge kodwa ke kuzolunga futhi kuyajwayeleka ngokuhamba kweminyaka.
Thola olunye ulwazi:
Ukuhlelela ukudla ngendlela elinganisiwe “A balanced meal plan”
Ongcweti abahamba phambili ekulweni nesifo sikashukela eNingizimu Afrika